Imicimbi - iBezzia | IBezzia
Los zi ganeko Ziintlanganiso ezibanjwa ngoosaziwayo abaxhasa ubomi bentlalo yabantu abadumileyo. Ngesi sizathu, eBezzia sifuna ukubakho kuyo nganye kwaye sikuxelele malunga nezinto ezigqwesileyo ezenzekileyo: iilokhwe ezintle, amagama afanelekileyo, ukungabikho okukhulu, abaphumeleleyo kunye nazo naziphi na ezinye iinkcukacha ezifanelekileyo.
Akukho suku apho abantu abadumileyo bengabhaduli ubuhle kunye nee-saraos, zishiya ngasemva iingxelo, iifoto kunye neemvakalelo zazo zonke iintlobo. Siza kugxininisa ezo zihambelana nehlabathi labasetyhini: iikhaphethi ezibomvu, amaqela okanye imihla ebalulekileyo kunye nabasetyhini abanomdla nabaphumelelayo kunye namadoda njengabalingisi abaphambili.
Siza kujonga kubo kuba bayimizekelo kwaye kubo kuba baninzi ngamadoda amaphupha ethu, kodwa ngaphezulu kwako konke siza kujonga iklasi yabo, ubuhle babo, uvelwano lwabo nayo yonke into abanayo yokufaka isandla kwihlabathi.
Iminyhadala emi-4 yokonwabela umculo obukhoma
Nangona uninzi lweminyhadala inqunyanyisiwe unyaka wesibini ngokulandelelana, umculo uzakuphinda ubengumlingisi ophambili ...
U-Caslex Casademunt ufumana eyona mbasa yakhe ilindelweyo
por USusana godoy yenzayo Iinyanga ze5 .
Iindaba ezibuhlungu zokusweleka kuka-Caslex Casademunt zashiya wonke umntu engumkhenkce. Ngelishwa kwaye ebuhlungu, abahlobo bakhe ...
Iimarike zeKrisimesi zokundwendwela phantse
por USusana godoy yenzayo Iinyanga ze9 .
Kuyinyani ukuba lo nyaka uthatha lukhulu kuthi. Kodwa kufuneka iqatshelwe ukuba enkosi kwitekhnoloji ...
USuku lwezeNdalo kwiHlabathi liphela
por Susana Garcia yenzayo 1 ngonyaka .
USuku lwezeNdalo kwiHlabathi liphela ngoJuni 5 kwaye ibibhiyozelwa ukusukela ngo-1974, xa ...
Yonke into ilungiselelwe i-2020 ye-Oscar Awards gala
Yonke into ilungele ushicilelo lwama-92 lwee-Oscars oluza kubanjwa ngokuhlwanje eDolby ...
I-Manga Barcelona Hall, ikota yeshumi yempumelelo
I-Manga Barcelona Salon ivule iingcango zayo kwimpelaveki ephelileyo kwaye ibiyenza ngendlela enkulu ...
Bonke abaphumeleleyo kwi-MTV European Music Awards
Izolo ebusuku iiMTV European Music Awards (EMA) zibanjelwe eSpain. ISeville yayisisixeko ...
USeville ubamba iiMbasa zoMculo zaseYurophu zeMTV namhlanje
Ibhotwe leMiboniso kunye neeNkongolo zekomkhulu laseAndalusiya namhlanje zibambe umsitho wokuwongwa ngeMTV ...
Elona xesha lilungileyo leVeki yeFashoni yeParis 2019
IVeki yeFashoni yaseParis ifikelele esiphelweni. Esinye seziganeko zefashoni zamva nje ezenzeka rhoqo ...
Amabhaso e-Emmy 2019: Abaphumeleleyo, ukumangaliswa kunye namaxesha amahle
Uhlelo lwe-71 lweeMbasa zeEmmy lwalubhiyozelwa ngesimbo, njengoko siqhelile. Kunjalo…
Iiveki zefashoni zoba ikhalenda exakekileyo
Ngelixa sizama ukubuyela esiqhelweni, ilizwe lefashoni lihlala kwezona nyanga zishushu. ...